DTP Booster ကာကွယ်ဆေး ဆိုတာဘာလဲ? ကလေးတိုင်းအတွက် ဘာ့ကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ? - Chit MayMay
Home Child Care DTP Booster ကာကွယ်ဆေး ဆိုတာဘာလဲ? ကလေးတိုင်းအတွက် ဘာ့ကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ?
DTP Booster ကာကွယ်ဆေး ဆိုတာဘာလဲ? ကလေးတိုင်းအတွက် ဘာ့ကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ?
ကလေးတစ်ယောက်ကို ပဋိသန္ဓေစယူချိန်ကစပြီး မိဘတွေအနေနဲ့ အလိုချင်ဆုံးအရာတွေက ကလေးငယ်ကျန်းမာစွာ ကြီးပြင်းပြီး ဘဝကို သက်တောင့်သက်သာ ရှင်သန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ထိုဆန္ဒတွေက ပြောတော့သာ လွယ်တယ်ထင်ရပါတယ်။ လူတစ်ယောက်မွေးဖွားချိန်မှ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အထိ လူလားမြောက်အောင် ကျွေးမွေးသုတ်သင်ဖို့က လွယ်ကူတဲ့အလုပ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်စေတဲ့ စိန်ခေါ်မှုများစွာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရပါတယ်။
ထို့ကြောင့် သင့်ကလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ ဘယ်အန္တရာယ်မျိုးကိုမဆို လျှော့ချဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ကလေးရဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးအချိန်ဇယားအပေါ် up-to-date ဖြစ်ပေးပါ။ အချိန်မီကာကွယ်ဆေးထိုးရင် သင့်ကလေးရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားဟာ သင့်ကလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ဆိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ကြီးလေးသောရောဂါတွေကို တိုက်ထုတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကလေးရဲ့ ကိုယ်ခံအားကို မြှင့်တင်ဖို့ အရေးကြီးတဲ့ ထိုကဲ့သို့သော ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးက DTP booster ကာကွယ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။
DTP ကာကွယ်ဆေးဆိုတာ ဘာလဲ?
DTP ကာကွယ်ဆေးဟာ သင့်ကလေးအား ဆုံ့ဆို့၊ မေးခိုင်နှင့် ကြက်ညှာချောင်းဆိုး ကဲ့သို့သော ပြင်းထန်ကူးစက်ရောဂါတွေမှ ကာကွယ်ဖို့ အထူးလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ပြင်းထန်သောဖြစ််ရပ်တွေမှာ ဒီရောဂါတွေက သေစေနိုင်ပါတယ်။ DTap ကာကွယ်ဆေးဆေးပတ်ကို စတင်ပြီးတာနဲ့ သင့်ကလေးအား သူတို့ကလေးဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ ဒီသေစေနိုင်တဲ့ ရောဂါတွေကနေ ကာကွယ်ပါလိမ့်မယ်။
DTP ကာကွယ်ဆေးအတွက် အစီအစဉ်ဇယား
ကလေးတစ်ယောက်ကို ငယ်ငယ်ကတည်းက ဒီကွဲပြားခြားနားသော အဆင့်တွေတစ်လျှောက်လုံး ကာကွယ်ဆေး ခြောက်ကြိမ်ထိုးပေးသင့်ပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေးဇယားက တိုင်းပြည်အလိုက် ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
အသက် ၄နှစ်မှ ၆နှစ်အကြား ကလေးငယ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ လူမှုရေးခရီးကို စတင်ကြပြီး ပြင်ပကမ္ဘာနဲ့ ရောနှောတဲ့အခါ ကူးစက်ရောဂါများစွာနဲ့ ထိတွေ့လာကြပါတယ်။ အချိန်မီ အာနိသင်တိုးမြှင့်ကာကွယ်ဆေးတွေက ထိုကူးစက်ရောဂါတွေကို ကောင်းစွာကာကွယ်ဖို့ (သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ဖို့) နဲ့ သူတို့ရဲ့ ငယ်ရွယ်သော မောင်နှမတွေနဲ့ အဘိုးအဘွားတွေကို ကာကွယ်ဖို့ အရေးပါလာပါတယ်။ အာနိသင်တိုးမြှင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းကို နှောင့်နှေးစေခြင်းက အလေ့အကျင့်ကောင်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ခုခံအားကျဆင်းမှုက အချိန်ကြာလာတာနှင့်အမျှ အာနိသင်တိုးမြှင့်ကာကွယ်ဆေး(booster vaccinations)မှတဆင့် အားပြန်ပြည့်လာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ယခု ကူးစက်ရောဂါတွေ ဖြစ်ပွားပြီးရင် ကလေးတွေကို ကျောင်းပြန်ပို့ရတော့မှာ ဖြစ်လို့ပါ။
Previous articleမိဘတွေနဲ့ အရွယ်ရောက်ကလေးတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးကို ပိုကောင်းမွန်စေမယ့် နည်းလမ်း (၅)ချက်
Next articleကလေးငယ်တွေအမြဲတမ်း မှတ်မိနေလိမ့်မယ်အရာ (၅) ချက်